October 2012 – Thabarwa Centre
ဘ၀တစ်သက်တာ ဆောင်ရန် – ရှောင်ရန် (အနတ္တအဆုံးအမများ အပိုင်း ၁)
Feb 11, ’12 3:21 AM
ဘ၀တစ်သက်တာ ဆောင်ရန် – ရှောင်ရန်
(အနတ္တအဆုံးအမများ အပိုင်း ၁)
အဓိက ထားရမှာ နဲ့ မထားရမှာ
– လုပ်သင့်တာကိုလုပ်နိုင်ဖို့ကိုသာ အဓိကထား၊
-ဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ဖို့ကိုသာ အဓိကထား၊
ဖြစ်ချင်တာ(မဖြစ်ချင်တာ) ကို အဓိကမထားနဲ့။
– အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတာ၊ မရှိတာထက်၊
စိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိမနေဖို့ကို အဓိကထားပါ။
– ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရောဂါရှိတာ မရှိတာထက်၊
စိတ်ထဲမှာ ရောဂါရှိမနေဖို့ကို အဓိကထားပါ။
-ပြုလုပ်သည့်အတိုင်းပင် အကျိုး ဖြစ်သည်။
-သတ်ဖြတ်ခြင်း၏အကျိုးသည် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
-အမျက်ထွက်ခြင်း၏ အကျိုးသည် အမျက်ထွက် ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
-သူတစ်ပါးကို ဒဏ်ပြုလျှင် သင်လည်းဒဏ်ပြန်ခံရလိမ့်မည်။
-မကောင်းမှုသည် လတ်ဆတ်သောနို့ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမသွားပေ၊
-အကျိုးမဲ့အချည်းနှီးဖြစ်သော စကားအခွန်း တစ်ထောင် နာကြားရသည်ထက်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိမည့်
-တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လူမိုက်လူအ ဟူ၍
ပြောဆိုနေကြသူတို့သည် လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ကြပေ၊ အကြောင်းမူကား သူတို့သည်
မိမိ၏အယူဝါဒကိုသာလျှင် အမှန်ဟုယူဆကြ၍သူတစ်ပါးတို့ကိုမူ လူမိုက်လူအဟု ထင်မှတ်ကြ
-အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် လုံ့လ
ရှိသူ လမ်းကောင်းလမ်းမှန်သို့သွားသူ ဇွဲရှိသူ မိတ်ဆွေမျိုးကို တွေ့ရလျှင် ဒုက္ခဟူသမျှ အနှောင့်
အယှက်ဟူသမျှကို တွေ့ကြုံခံစားရသော်လည်း ထိုမိတ်ဆွေနှင့် အတူတကွ နေသင့်သည်။
-လောက၌ အကဲ့ရဲ့လွတ်သောသူဟူ၍ မရှိ၊ ချီးမွမ်း စရာ တစ်ကွက်မျှမရှိသောသူ ကဲ့ရဲ့စရာတစ်ကွက်
မျှ မရှိသောသူဟူ၍ ရှေးကလည်းမရှိခဲ့ နောင်သော အခါလည်း ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်၊ ယခုလည်းမရှိ။
-အချို့သောသူတို့က မြတ်၏ဟု အထင်ရှိသော
တရားကိုပင် အချို့သောသူတို့က ယုတ်၏ဟု အထင်ရှိကြသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးသည် ကိုယ့် ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တတ်ကြသည်ဖြစ်ရာ ယင်းတို့၏
၀ါဒအနက် အဘယ်ဝါဒသည် မှန်ကန်သင့်လျော် သည်ဟု ပြောမည်နည်း။
-ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာထက် ဘာလုပ်သလဲ ဆိုတာကို ပိုအဓိကထားပါ၊
-ဖြစ်တဲ့အကျိုးထက် ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကို ပိုအဓိကထားပါ။
-ဖြစ်တာ မဖြစ်တာ၊ လုပ်တာ မလုပ်တာ၊ သိတာ၊ မသိတာတွေကို အဓိကထားမှုကြောင့် လုပ်ချင် – မလုပ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်၊ သိချင်မသိချင်ဆိုတဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်၊
အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အဓိကထားမှုကိုစွန့်နိုင်မှ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အဖြစ်ရပ်မယ်။
ရဲ့ သေးသိမ်တဲ့လိုအင်ဆန္ဒနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်။
-နာမည်ကို အဓိကထားရင် နာမည်ခံပဲဖြစ်မယ်၊
အလုပ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဓိကထားမှ
-စကားကို အဓိကထားတာ၊ စိတ်ကို အဓိကထား တာထက် တရားနားလည်ဖို့ကို အဓိကထားမှ မှန်တယ်။
-အပူဇော်ခံရတာမခံရတာထက် အပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
-လာဘ်လာဘပေါတာ မပေါတာထက် အလှူခံယူ ထိုက်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
-သူများကြည်ညိုတာ မကြည်ညိုတာထက်အကြည် ညိုခံထိုက်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
-အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ အချိန်ကာလ၊ နေရာ
ဒေသတွေ၊ တွေ့ကြုံတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုအဓိက
ထားမှုကိုစွန့်ပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုသာ အဓိကထားပါ။
(သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ၏ အနတ္တအဆုံးအမများ ၃-၂၀၁၁၊ ၄-၂၀၁၁ ကို အပိုင်းခွဲလျှက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။)
ပညာ အမိုး၊ သမာဓိ အခင်း၊ သီလ အကာ
Leaveacomment	အနတ္တအဆုံးအမများ
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၈)
Jan 13, ’12 9:21 AM
ဖြစ်ပေါ်လာသော လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ အတွေးစိတ်၊
ခံစားမှု ၊ တို့ကို တိုက်ရိုက် ပယ်ဖို့ (သို့) တွယ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။
“တံလျှပ်ကိုရေထင် ရွှေသမင်အလိုက်မှား“ ဟူသော စကားကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားဖူးကြပါသည်။
နွေရာသီ အပူချိန်ပြင်းချိန်တွင် မြေပြန့်နေရာတချို့တွင် တံလျှပ်များ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။
အဆိုပါ တံလျှပ်များကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ကြည့်ရှုပါက ရေအိုင်ငယ်လေးများဟု ထင်မှတ်ရပါသည်။
တံလျှပ်မှ ရေအိုင်များ အသွင် ဖန်ဆင်းထားမှုတွင် တစ်ဦးဦးသည်….
အဆိုပါ တကယ်မရှိသော ရေများကို အရှိ-အဟုတ်ထင်မှတ်လျှက်
သောက်လိုနေခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားလိုခြင်း (သို့) တွယ်တာနေခြင်းသည်
ထို့အတူ တကယ်ရှိနေ-ဖြစ်မနေသော ပညတ် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ အတွေးစိတ် စသည်တို့ကို
“တိုက်ရိုက်ပယ်ခြင်း (သို့) ငြိတွယ်နေခြင်း” တို့သည်
”တကယ်မရှိတာကို အရှိလုပ်နေခြင်း၊ တကယ်မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်နေခြင်း”
သာ ဖြစ်လေ သည်။
၁။ ထင်ရှားသော ရုပ်(ပူမှု-အေးမှု၊ တောင့်မှု-တင်းမှု၊ နာမှု-ကိုက်မှု) တစ်ခုခု တို့ကို
အတည်ယူ-အဟုတ်ထင်လျှက် တိုက်ရိုက် ပယ်ခြင်း (သို့) တွယ်ခြင်း မပြုရပဲ။
အဆိုပါ ရုပ်(ပူမှု-အေးမှု၊ တောင့်မှု-တင်းမှု၊ နာမှု-ကိုက်မှု) တို့နှင့်အတူ
“အတည်ယူ-အဟုတ်ထင်-အဓိကထားနေမှု (မောဟ)” ကိုသာ စွန့်လွှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပစ္စုပ္ပါန်ဖြစ်ပေါ်လာသော လောဘစိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ အတွေးစိတ် တို့ကို
အတည်ယူ-အဟုတ်ထင်လျှက် တိုက်ရိုက်ပယ်ခြင်း (သို့) တွယ်ခြင်း မပြုရပဲ။
အဆိုပါစိတ်များနှင့်အတူ တွဲလျှက်ဖြစ်ပေါ်နေသော “အဟုတ်ထင်-အဓိက ထားနေမှု” ကို သာ စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုပါသည်။
ဖြစ်ပေါ်လာသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့အပေါ် ဥပေက္ခာသဘောထား ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ အ၀ိဇ္ဇာစိတ်သည် ဗဟိဒ္ဓ ဖြစ်စေ-အဇ္ဈတ္တဖြစ်စေ
တစ်ခုခုကို အဓိက ထားနေလေသည်။
ပစ္စုပ္ပါန်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်တို့နှင့် အတူ အဆိုပါ စိတ်များ အပေါ်
“အဟုတ်ထင် – အဓိကထားနေမှု“ တွဲလျှက် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။)
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၇)
Jan 12, ’12 9:11 AM
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ဖြစ်သောကြောင့်
(စိတ်ထဲ) အဟုတ်ထင်-အဓိကထားနေမှုကို စွန့် ရ တာ ပါ။
ရုပ်-စိတ်-ဝေဒနာ ဟူသမျှ တို့သည် အနိစ္စ-ဒုက္ခ-အနတ္တတရား ဖြစ်သော ကြောင့်
အတည်ယူလို့မရ၊ ဆုပ်ကိုင်လို့မရ ၊ အဟုတ်ထင်လို့မရပါ ။
ထို့ကြောင့် ရုပ်-စိတ်-ဝေဒနာ တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လောကီသတ်မှတ်ချက်များကို လည်းကောင်း
အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
– ရောဂါဖြစ်မှု – မဖြစ်မှု ၊ နာမှု – မနာမှု ၊ ဝေဒနာဖြစ်မှု – မဖြစ်မှု ၊
စိတ်ပျံလွင့်မှု – မပျံလွင့်မှု၊ ဆင်းရဲမှု – ချမ်းသာမှု စသည့် ဖြစ်ခြင်း-မဖြစ်ခြင်း အကျိုးတရား တို့သည် လည်းကောင်း၊
– ဟိုလိုလုပ်မှ ၊ ဒီလိုလုပ်မှ ဆိုတဲ့ ပြုလုပ်ခြင်း-မပြုလုပ်ခြင်း အကြောင်းတရား တို့သည်လည်းကောင်း၊
အဆိုပါ အကြောင်း အကျိုးတရားတို့အပေါ် နားလည်မှု-နားမလည်မှု တို့သည် လည်းကောင်း .
”ဖြစ်ပြီး ပျက်နေသော သင်္ခါရတရား” ဖြစ်သဖြင့် အတည်ယူလို့မရ၊ ဆုပ်ကိုင်လို့မရ ၊ အဟုတ်ထင်လို့မရပါ ။
ထို့ကြောင့် မိမိနားလည်နေတဲ့ –
၁) အကျိုးတရားများဖြစ်သည့် ဖြစ်မှု-မဖြစ်မှု (သို့) ဖြစ်ချင်မှု – မဖြစ်ချင်မှု ၊
ပျက်စီးမှု – မပျက်စီးမှု (သို့) ပျက်စေချင်မှု – မပျက်စေချင်မှု ၊
၂) အကြောင်းတရားများဖြစ်သည့် ပြုလုပ်မှု-မပြုလုပ်မှု (သို့) ပြုလုပ်ချင်မှု – မပြုလုပ်ချင်မှု၊
၃) အထက်ပါ အကြောင်းအကျိုးများနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်မှု-နားမလည်မှု (သို့)
နားလည်ချင်မှု- နားမလည်ချင်မှု တို့သည်လည်း
အဆိုပါ မမြဲသော အကြောင်းအကျိုး-သင်္ခါရတရားတို့အပေါ်
(စိတ်ထဲ) “အတည်ယူ အဟုတ်ထင် အဓိကထားနေမှု”
ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ အကြောင်းအကျိုးတရားတို့အပေါ်
တစ်ခုပြီးတစ်ခု …ဟိုဟာပြီး ဒီဟာ… ဒီဟာပြီး ဟိုဟာ
မဆုံးနိုင်အောင် (စိတ်ထဲ) အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်နေခြင်းအားဖြင့်
အကြောင်းအကျိုးတရားတို့အပေါ် ပယ်ခြင်း-တွယ်ခြင်းမပြုဘဲ (လောဘ-ဒေါသ မဖြစ်ပဲ)
What we will get does not depend on others
but our acceptance with open-mind &
abandonment power of mental clinging.
သုံးရုံသက်သက်-တွေ့ ကြုံရုံသက်သက် တွေ့ ကြုံတတ်စေဖို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဥပေက္ခာသဘောထား ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေဖို့ သာ အဓိကထားပါ။
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၆)
Jan 6, ’12 1:38 AM
စွန့်လွှတ်ခြင်းဘာဝနာမယပညာ အတွက် အ သုံး ချ ဖို့ ပါ။
ကျွန်ပ်တို့တတွေ ရောဂါဝေဒနာ-အခက်အခဲ-ပြဿနာများ စသည်တို့ ဖြစ်လာသောအခါ စိတ်မပျက်ဘဲ
ထို အခက်အခဲ-ပြဿနာများ-ရောဂါဝေဒနာကို တွေဟာ …
မိမိကို အသိဉာဏ် နှင့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကို ရင့်ကျင့်အောင် လေးနက်အောင် လုပ်ဖို့ အကြောင်း ဖန်လာတာပဲလို့ နားလည်ပါ။
လေးနက်သော အသိဉာဏ်များ များရဖို့ အသုံးချစရာ ဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ နားလည်ပါ။
တခါတရံ မကောင်းကျိုးဟု မိမိထင်သော အရာတွေဟာ ကောင်းကျိုး များဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်
အကြောင်းတရားများ ဖြစ်နေတတ်သည်ကို သတိပြုဖို့ လိုပေသည်။
၀ိပဿနာ ဆရာကြီး အက်စ်အင်ဂိုအင်ကာ ၏ ပြင်းထန်သော ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာသည်
ဆရာကြီး-၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်း နှင့် တရားနားလည်ဖို့
မကောင်းကျိုးဟု ထင်ရသောအရာ များသည်ပင်လျှင် အသုံးချတတ်ပါက
ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာ အကြောင်းတရား များဖြစ်နေသည်ကို သတိပြုရပေမည်။
၁) အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေကို စွန့်လွှတ်စရာအဖြစ် အသုံးချရပါမယ်။
အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဘာဝနာမယပညာ လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အသုံးချရပါမယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာအပေါ် “အဟုတ်ထင် အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့” အခက်အခဲ-ပြဿနာတွေကို အသုံးချရပါမယ်။
၂) စိတ်တွေ- ဝေဒနာတွေ- ခံစားချက်တွေကို စွန့်လွှတ်စရာအဖြစ် အသုံးချရပါမယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ စိတ်တွေ- ဝေဒနာတွေ- ခံစားချက်တွေအပေါ် “အဟုတ်ထင် အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့”
…စိတ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ခံစားချက်တွေကို အသုံးချရပါမည်။
၃) ပစ္စုပ္ပါန် ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်နှင့်အတူ အဆိုပါစိတ်အပေါ် “အဟုတ်ထင်-အဓိကထားနေမှု (အစွဲ)”
– … ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ် ကို တိုက်ရိုက် မကိုင်တွယ်ရဘဲ (တိုက်ရိုက်ပယ်ခြင်း – တွယ်ခြင်းမပြုရဘဲ) ၊
ပစ္စုပ္ပါန် ဖြစ်ပေါ်နေသော စိတ်နှင့်အတူ တပါတည်းတွဲလျှက် ဖြစ်ပေါ်နေသော နောက်ကွယ်မှ
“အဟုတ်ထင်-အဓိကထားနေမှု (အစွဲ)” ကိုသာ ဖြုတ်ရ – စွန့်ရပေမည်။
ပစ္စုပ္ပါန် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ““အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ၊ အနှောက်အယှက် ”” တွေကို
တရားနဲ့ (စွန့်လွှတ်ခြင်းပညာဖြင့်) ဖြေရှင်းမှသာ တရားနားလည်နိုင်မှုကို ကျေးဇူး ပြုပါသည်။
– … အခက်အခဲ – ပြဿနာတွေ အနှောက်အယှက်တွေကို သူလိုငါလို လောဘ-ဒေါသ နည်းလမ်းစုံဖြင့်
ဖြေရှင်းနေသူအတွက် တရားစစ်ကို နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
“စွန့်လွှတ်စရာအဖြစ် အသုံးချတတ်ပါမှ” ၊
ကို မမေ့ရန် သတိရနေရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။“
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၅)
Jan 3, ’12 4:38 AM
အကြောင်း-အကျိုး ၊ အကောင်း-အဆိုးတွေအပေါ်
(ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ ၂၀၁၁ – တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ – အပိုင်း ၅)
၁) ကိုယ်-နှုတ်-စိတ် (ကာယ-၀စီ-မနော ဖြစ်မှု-မဖြစ်မှု) အ ကျိုး တ ရား များ။
၂) ကာယကံ-၀စီကံ-မနောကံ (လုပ်မှု – မလုပ်မှု) အ ကြောင်း တ ရား များ။
၃) အဆိုပါ အကြောင်း-အကျိုးတရားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နားလည်မှု -နားမလည်မှု စသည် တို့ နှင့်အတူ
…..အဟုတ်ထင်မှု – တကယ်ထင်မှု ၊
……အတည်ယူမှု – ဆုပ်ကိုင်မှု ၊
……ငြိတွယ်မှု – ငဲ့ကွက်မှု – ထည့်တွက်မှု – အရေးထားမှု၊
……အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်နေတာ ……တရားအလုပ်ပါ။
““ပူမှု-အေးမှု၊ တင်းမှု-လျော့မှု၊ နှစ်သက်မှု-မနှစ်သက်မှု၊ ဆင်းရဲမှု- ချမ်းသာမှု၊ အကောင်း-အဆိုး၊ နာမှု-မနာမှု၊ စိတ်ပျံလွင့်မှု-မလွင့်မှု”” စသည့် ဆန့်ကျင်ဘက် သဘော-သဘောဝများသည် တကယ့်အရှိ-တကယ့်အဖြစ် မဟုတ်ဘဲ – တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ) ၏ လှည့်စား ပုံဖော်-အသက်သွင်းမှုကြောင့်သာ …တကယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ရသော ပညတ်တရားများသာ ဖြစ်လေသည်။
“တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု (အ၀ိဇ္ဇာ သင်္ခါရ) ၏ လှည့်စား ပုံဖော်အသက်သွင်းနေမှုများသာ တကယ်ဖြစ်နေ-ပျက်နေသည်ဟူသော အမှန်တရား” ကို . . .
မ မေ့ ခြင်း ဆင် ခြင် နေ ခြင်း အားဖြင့် ” – အဆိုပါပညတ်တရားများကို “တိုက်ရိုက် ပယ်ခြင်း-တွယ်ခြင်းမပြုဘဲ” အသုံးချရုံသက်သက်
ထို ပညတ်တရား များ
နှင့်အတူ တွဲလျှက် ဖြစ်ပေါ်နေသော နောက်ကွယ်မှ “အတည်ယူ-အဟုတ်ထင် အဓိကထားနေမှု” ကို သာ စွန့်လွှတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၄)
Dec 26, ’11 9:58 AM
သမုဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာပဲ ဖြစ်နေတာကို “ငါ့သမုဒယ – ငါ့ဒုက္ခ´´ မလုပ်ပါနဲ့။
သစ္စာလေးပါး ကို ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သိကြပါသည်။
၄) မဂ္ဂသစ္စာ ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိနားလည်နေသော သစ္စာလေးပါးအဓိပ္ပါယ်သည် တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါများ နှင့် ပတ်သက်နေသော သမုဒယ၊ ဒုက္ခ၊ နိရောဓ၊ မဂ္ဂ များသာဖြစ်လေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဒိဌိမပြုတ်သော တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ ပါဝင်သော အမြင်များသာ ဖြစ်ပြီး၊ ထို တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ အမြင်များထက် ကျော်လွန်သော သစ္စာလေးပါးအဓိပ္ပါယ်ကို ဥာဏ်မီသမျှ တင်ပြအပ်ပါသည်။
– ဒုက္ခသစ္စာ – တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု ။ (အဖြစ်စစ်)
(မှတ်ရန်။ နာမှု၊ ကိုက်မှု၊ ပူမှု၊ အေးမှု၊ ရောဂါ-ဝေဒနာ-ပြဿနာ-စိတ်ညစ်စရာ စသည်တို့သည် တသမတ်တည်း ဖြစ်နေ-မြဲနေခြင်းမရှိသဖြင့်
သစ္စာထိုက်သော ဒုက္ခမဟုတ်၊ အဖြစ်စစ်မဟုတ်။ စိတ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ပညတ်ဒုက္ခများသာဖြစ် လေသည်။)
– သမုဒယသစ္စာ – တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်ဟု ထင်မှတ်ကာ အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အဓိကထားနေမှု။
နာမှု၊ ကိုက်မှု၊ ပူမှု၊ အေးမှု၊ ရောဂါ-ဝေဒနာ-ပြဿနာ-စသည့် ပညတ်ဒုက္ခများအပေါ် ကို အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အတည်ယူ-အဓိကထားနေအောင် ဖန်တီးလှည့်စားပြုလုပ်နေမှု။ (အလုပ်စစ်)
(မှတ်ရန်။ တသမတ်တည်းသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီး မှု ဒုက္ခသစ္စာ မှ ပူမှု-အေးမှု၊ နာမှု-ကိုက်မှု စသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တစ်ခုခု ကို အတည်ယူ အဟုတ်ထင် အဓိကထားနေအောင် ဖန်တီးလှည့်စားပြုလုပ်နေမှု။)
(အ၀ိဇ္ဇာ၊ သင်္ခါရ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ ဖြစ်လေသည်။ )
– နိရောဓသစ္စာ – တသမတ်တည်းသော ထပ်တလဲလဲသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတို့ ချုပ်ငြိမ်းရာ- မပြောင်းမလဲ တသမတ်တည်းသော တည်မြဲမှု အရှိတရား။ အသင်္ခတဓါတ် တရား။ (အရှိစစ်)
– မဂ္ဂသစ္စာ – ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ်၊ (သင်္ခါရတရား)တို့ကို တိုက်ရိုက် ပယ်ခြင်း၊ တွယ်ခြင်း – မပြုဘဲ အဆိုပါ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့အပေါ် အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အဓိကထားနေမှု (အစွဲ)ကို စွန့်လွှတ်နေခြင်း။ (အသိစစ်)
(မှတ်ရန်။ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် (သင်္ခါရတရား)တို့အပေါ် တွေ့ကြုံရုံသက်သက် ဥပေက္ခာထားနိုင်မှု ဖြစ်ပါသည်)။
ဖြစ်ပေါ်သမျှ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့ အပေါ် … တကယ်ထင် အဟုတ်ထင်ကာ အဓိကထားနေအောင် ပုံဖော်-အသက်သွင်း ဖန်တီးပြုလုပ်နေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ)ပဲ တကယ်ဖြစ်နေ-ပျက်နေခြင်း အမှန်တရား (၀ါ) သမုဒသသစ္စာ နှင့် ဒုက္ခသစ္စာပဲ ဖြစ်နေခြင်း ကို ယုံကြည် လက်ခံ နှလုံးသွင်းနေခြင်းအားဖြင့် – – –
လက်ရှိ သိနားလည်နေသော ခံစားနေရသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့၏ ဖြစ်ခြင်း-ပျက်ခြင်းအပေါ် အတည်ယူ – အဟုတ်ထင်- ငြိတွယ်- အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်နေပါ။ သမုဒယသစ္စာ နဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ ပဲ ဖြစ်နေတာ ကို ငါ့ဒုက္ခ ၊ ငါ့ သမုဒယ အဖြစ် မယူရန် – အထင်မမှားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်သမျှ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် တို့အပေါ် အဟုတ်ထင်-အဓိကထားနေမှု ကို စွန့်လွှတ်နေနိုင်ခြင်းသည်ပင်လျှင် မဂ္ဂသစ္စာထိုက်ပါသည်။
ဥပမာ – ခါးကိုက် ဝေဒနာဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ခါးသည် မသိတတ်သော ရုပ်ဖြစ်သဖြင့် ကိုက်သည်-နာသည်ဟုမပြောပေ။ … သို့သော် အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရတို့ မှ အရင် အခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကိုက်သည်-နာသည်ဟု ထင်မှတ်အောင် ပုံဖော် အသက်သွင်း ဖန်တီးပြုလုပ်နေလေသည်။
ခါးကိုက်နေစဉ် အိပ်ဆေးတိုက်၍ အိပ်ပျော်သွားသော် ခါးမကိုက်တော့ပေ။…..
ခါးက ကိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲမှ ကိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည် လက်ခံပါ။
“အ၀ိဇ္ဇာစိတ်၏ ပုံဖော်-သတ်မှတ်-ဖန်တီးပြုလုပ်နေမှု သက်သက် သာ“ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်လက်ခံပါ။
ထို့ကြောင့် နာသည်-ကိုက်သည်ဟု ထင်နေရသော ပညတ်ရုပ်ကို အာရုံထား ခြင်း၊ အဓိကထားခြင်းမပြုရဘဲ – အဆိုပါ ပညတ်ရုပ်-နာမှု-ကိုက်မှုကို “အဟုတ် ထင်အောင်-တကယ်ထင်အောင်-အဓိကထားအောင်“ ပုံဖော် အသက်သွင်း ဖန်တီး လှည့်စားနေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ-သမုဒယသစ္စာ) ပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း အမှန်တရားကို ကိုသာ မမေ့ရန် – နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရန် – အဓိက ထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
(အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ-သမုဒယသစ္စာ သည် မနောဝိဥာဏဓါတ် မနော-ဘ၀င်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ )
ပစ္စုပ္ပါန်ဖြစ်ပေါ်နေသော ရုပ်၊ စိတ်၊ ဝေဒနာတို့ ကို အဟုတ်ထင်အောင် တကယ် ထင်အောင် အဓိကထားအောင် ပုံဖော် အသက်သွင်း ဖန်တီး ပြုလုပ်နေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ-သမုဒယသစ္စာ) ပဲ တကယ်ဖြစ်နေ-ပျက်နေခြင်း အမှန်တရားအပေါ် အဓိကထားနေမှု ကို ပါ နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ စွန့်လွှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
What we will get does not depend on others but
our attitude, acceptance with open-mind and
the range of non-grasping on created truths.
ကျွန်ုပ်နားလည်မိသမျှ 2011 တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (အပိုင်း ၃)
Dec 23, ’11 3:46 AM
သုံးရုံသက်သက်၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက် ဖြစ်စေဖို့….
ရုပ်-စိတ်-ဝေဒနာ ဟူသမျှ တို့သည်လည်းကောင်း၊
ရောဂါဖြစ်မှု-မဖြစ်မှု၊ နာမှု-မနာမှု၊ ဝေဒနာရှိမှု-မရှိမှု၊
လှုပ်မှု-ငြိမ်မှု၊ တင်းမှု-လျော့မှု စသော သတ်မှတ်ချက် ဟူသမျှတို့သည်လည်းကောင်း၊
အတည် ယူလို့မရ ၊ ငြိတွယ်နေလို့ မရ ၊ အဟုတ်ထင်နေလို့မရပေ။
“အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ (ဖြစ်ပျက်-ဒုက္ခသစ္စာ)” ဟု နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ရခြင်းမှာ …
အဆိုပါ ရုပ်-စိတ်-ဝေဒနာ တို့အပေါ် (သို့) သတ်မှတ်ချက်ဟူသမျှတို့အပေါ်
“အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အဓိကထားနေလို့မရ ဟူသော အမှန်တရား” ကို သဘောပေါက် နားလည်စေရန်ဖြစ်လေသည်။
“အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ (ဖြစ်ပျက်-ဒုက္ခသစ္စာ) ဖြစ်သဖြင့် …..
“အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်-အလေးထားနေလို့မရ ဟု ” နားလည် သဘောပေါက်ကာ-
– သတ်မှတ်ချက်ဟူသမျှတို့ အပေါ် တွင်လည်းကောင်း၊
– ရုပ်-စိတ်-ဝေဒနာ ဟူသမျှ တို့အပေါ်၌ လည်းကောင်း၊
ငြိတွယ်မှုမရှိဘဲ….. သုံးရုံသက်သက်၊ တွေ့ကြုံရုံသက်သက် ဖြစ်စေရန်အတွက်-
….. ဖြစ်မှု-မဖြစ်မှု၊ ဖြစ်ချင်မှု-မဖြစ်ချင်မှု၊
….ပြုလုပ်မှု၊ မပြုလုပ်မှု၊ ပြုလုပ်ချင်မှု၊ မပြုလုပ်ချင်မှု၊
….သိမှု၊ မသိမှု၊ သိချင်မှု၊ မသိချင်မှု၊
….နားလည်မှု၊ နားမလည်မှု၊ နားလည်ချင်မှု၊ နားမလည်ချင်မှု၊
…. ဝေဒနာပေါ်မှု-မပေါ်မှု၊ စိတ်ပျံလွင့်မှု-မပျံလွင့်မှု၊
….ဆူညံမှု-တိတ်ဆိတ်မှု၊ ပူမှု-အေးမှု၊ ဆင်းရဲမှု-ချမ်းသာမှု၊
….လှုပ်မှု-ငြိမ်မှု၊ တင်းမှု-လျော့မှု၊ နာမှု-မနာမှု စသည် တို့အပေါ်၌
(စိတ်ထဲ) “အဟုတ်ထင်-အတည်ယူ-ဆုပ်ကိုင်-ငြိတွယ်-အလေးထားနေမှု” ကို စွန့်လွှတ်နေပါ။
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားကို တစိုက်မတ်မတ်ပြုလုပ်နေရမှာ။